mpamatsy makiazy mpamatsy sy orinasa - mpanamboatra fitaovana makiazy any Sina
Borosy borosy borosy napetraka Premium Synthetic Foundation borosy makiazy borosy napetraka blending tarehy vovoka menaka Concealers maso aloky ny tarehy borosy kit 8 PCS
Ny volom-bolo matevina dia vita amin'ny kofehy synthetic ambony misy hakitroka avo lenta, malefaka ary tsy misy fofona izay azo antoka amin'ny fampiasana hoditra marefo. Maharitra, tsy mandatsaka ary tsy manjavona, tena mora ny mampifangaro volo-tarehy amin'ny fomba tsy misy fotony ny hoditrao.
Borosy Concealer, borosy mena, borosy aloky ny maso, borosy volomaso, borosy molotra, borosy fototra, borosy contour misy zoro, sns saika mahafeno ny fepetra takiana aminao amin'ny fampiharana makiazy tarehy sy maso.
Ny borosy rehetra dia malefaka sy mora mitazona makiazy, tonga lafatra ho an'ny vehivavy makiazy sy olona manana hoditra tsotra sy mora tohina ary tsy hahasosotra anao.
Ity sety borosy 8 Pcs Makeup ity dia toa tsara tarehy sy lamaody amin'ny loko tsara tarehy malaza indrindra, tsy maintsy ananana amin'ny fanangonana makiazy anao.
Lavorary ho an'ny mpanakanto vao manomboka sy makiazy satria mora ampiasaina izy ireo ary ambony kalitao amin'ny vidiny mirary, isan-karazany feno ahafahanao mitazona makiazy. Fanomezana mety ho an'ny reny, namana vehivavy, zanakavavy ary olon-tiana!
Borosin-tsolom-bolo vita amin'ny menmazy 10 pcs 10 borosy
Ny borosy dia vita amin'ny volon'ondry nilona, ​​malefaka nefa tsy marefo, tsy handrovitra na hanelingelina ny hoditrao. Mety amin'ny karazana hoditra rehetra, na dia ny hoditra marefo aza. Tsy hilatsaka ity fonosana borosy ity, haneho ny hatsaranao voajanahary ary hamela fahatapahana tsy misy kilema
Tovovavy mermaid tsy manam-paharoa, tsara tarehy sy kanto. Ny contour dia mikatso ary mora tazonina. Tonga lafatra amin'ny fandidiana.
Mora ampiasaina sy madio. Azonao atao ny manasa sy manadio azy ireo amin'ny rano mangatsiaka fotsiny. Borosy mora ampiasaina mety ho an'ny vao manomboka.
Borosy makiazy napetraka 6 pcs 3D Mermaid makiazy borosy kosmetika borosy Eyeshadow Eyeliner Blush borosy
ULTRA SOFT BRISTLES: Ity borosy makiazy ity dia vita amin'ny volon'ondry nilona malefaka matevina, tsy mandatsaka ary tsy misy fofona, mora miraikitra amin'ny vovoka hamoronana endrika tonga lafatra.
DURABLE: Ny mahavariana 3D hazandrano trondro mermaid tail endriny vita amin'ny plastika premium, mateza ary koa sary mahafinaritra.
FANGONDRANA: Ity sety borosy 6 ity dia misy borosy aloky ny maso, borosy volomaso, borosy eyeliner, borosy molotra, sns, tonga lafatra amin'ny fampiharana, ny alokaloka ary ny fifangaroana vokatra.
Lavorary ho an'ny karazan-tsakafo REHETRA REHETRA: Ity masom-borosy ity dia mety tsara amin'ny fametahana ranon-javatra, vovoka na fanosotra fanosotra. Ny volom-borona somary malefaka dia hanome anao silky touch ary hamela fahatapahana tsy misy kilema.
SAFE FOR SKIN SENSITIVE: Ireo borosy makiazy ireo dia sady mora diovina no maina haingana, mety ampiasaina isan'andro, amin'ny fampiasana borosy makiazy no hahamora kokoa ny famoronana fampiharana makiazy matihanina.
Famaritana tsy miankina amin'ny hazo vita amin'ny hazo manokana borosy makiazy 24cm natao ho an'ny borosy hatsaran-tarehy
Ahitana borosy volom-bolo sentetika miisa 24 misy tantanana volotsangana
Anisan'izany ny borosy: buffer fisaka elite, vovoka manify elitika, vovoka elit, mena-barika ny elita, multurpose fisaka elit, fototra elit
Alokaloka lehibe elit, elite maranitra tondro, blender doefoot blender, mpankafy elit, aloky ny tendrony avo lenta, aloky ny dome elite
Blender maranitra elite, blender elite, elite concealer, aloky ny elite angled, liner flat elite, elite brow
Manondro antsipirihany elit, aloky kely elite, liner tsara tarehy elitre, liner elite, minier detail elite, elite angled
Famolavolana haingam-pandeha 11cm vita amin'ny kalitao vita amin'ny makiazy tsara tarehy miendrika mavomavo borosy mavokely
◆ NY tombony ho antsika.①FAHAMARINANA ny tahan'ny VOALOHANY, Vidiny azo atao. Ny borosy makiazy matihanina MURAN dia manolotra kalitao ho marika malaza miaraka amin'ny vidiny mirary.②LISTA MAORA SY PLUSH. Tsy fahasosorana amin'ny hoditra, tsy mitete.nangalatra famaranana tsy misy kilema.
◆ FITAOVANA BRUSH GLAMOROUS miaraka amin'ny fonosana goavam-be. FANomezana Krismasy lehibe ho an'ireo izay tia makiazy.
◆ Volo SYNTHETIKA PREMIUM, MAIMAIM-POANA. Ny borosy makiazy MURAN dia miaro ny biby tsy haratra.
◆ FAMPANDROSOANA PROFESIONALIKA NY BRUSHES MAKEUP FA DECADES. Fantatray tsara fa ny makiazy sy ny borosy dia afaka mamaly ny filanao manomboka amin'ny mpanakanto cosmetic studio.
◆ GARANTEE ATAO VOLA 100% REHEFA TSY METY AMIN'NY BRUSH MAKEUP ANTSIKA ianao.ny fahafaham-po no tanjonay. MURAN ho eo anilanao mandrakariva.
Borosy borosy kely miendrika volom-bolo kely 10 pcs
1. Marika vaovao sy avo lenta.
2. MALALAKA sy SILIKA amin'ny fikasihana, ny borosy dia matevina ary tsara endrika.
3. 10 pcs Kabuki Brush Set Synthetic Makeup Brush Foundation Eyeshadow Blush Concealer Powder Brushes dia mety indrindra ho an'ny mpanafika mpanakanto matihanina.
Borosy karazany dimy samihafa (Angled, Round, Flat, Flat Angled, Tapered) manome vahaolana mora sy matihanina ho an'ny fototra fanaovana kosmetika fototra.
Ohatra, ny borosy makiazy zoro zoro dia mety tsara amin'ny tarehy mena sy varahina. Ny borosy fisaka kely dia natao ho an'ny miafina tampoka sy kilema.
Ambongadiny Professional 10 pcs Rose Gold Plating Plating Handle Blush Make Up Brushes Girls Daily Makeup Brush Set With Case
Borosy makiazy habetsahana: 10pcs / napetraka
Tanana fitaovana: plastika avo lenta miaraka amina plastika volamena vita amin'ny volamena
Fitaovana fantsona: fantsona aluminium mahery
Fitaovana volo: volo naylon malefaka sy malefaka
Fonosana mahazatra: kitapo OPP,
Fonosana OEM: Misy, ekeo ny marika manokana sy fonosana manokana.
Ambongadiny Custom 5Pcs Premium Travel Portable mini makeup borosy setrin'ny aloky ny eyeliner eyebrow molotra mahaforona borosy napetraka
100% Marika vaovao sy avo lenta
Fitaovana borosy borosy: volo sentetika, volon'ondry
Fitaovana borosy borosy: firaka aliminioma
Fitaovana borosy borosy: plastika
Fitaovana borosy borosy: Aluminium
Halavany tanteraka: 12.5cm
Ny halavan'ny volo: 1.4cm
Ny halavan'ny Tube: 15cm
Loko: mavokely, mainty, cyan, volomparasy, volamena
Kitapo borosy matihanina 24 pcs matihanina manamboatra kitosy borosy vita amin'ny kosmetika miaraka amin'ny tranga vita amin'ny hoditra
Loko: mavokely, mainty, loko hazo, volomparasy, mena, kafe
Halavan'ny borosy: eo amin'ny 7.9 eo ho eo ”
Kitapo: 24 * 15.5 * 5cm (aforitra)
Fitaovana fikirakirana: Hazo
Fitaovana borosy: batt vita amin'ny fibre
Vovon-tsolosaina borosy borosy BB Cream borosy borosy malalaka volo borosy borosy fisaka kosmetika manamboatra borosy
Borosy mafy sy somary boribory
Ny fibre malefaka dia mahatonga ny makiazy ho tsara tarehy sy tsara tarehy kokoa
Ampiasaina amin'ny makiazy Blush / Loose Powder / Foundation
Maharitra sy mora ampiasaina
Volom-bolo manankarena tsara kokoa.
Famolavolana borosy petal, mora takarina.
Tantely borosy diamondra telo lafiny, mora raisina sy ampiasaina.
Borosy 200 000 eo ho eo misy fitaovana matanjaka.
Tsy hiala ilay borosy.
1pcs Vovon-tsakafo lehibe borosy volamena mamy tarehy kosmetika borosy borosy Fototra fitaovana hatsaran-tarehy kosmetika
Ity borosy ity izay vita amin'ny fitaovana avo lenta, malefaka malefaka, marevaka amin'ny hoditra ary maharitra, dia azo ampiasaina hanadiovana ny vovoky ny hoho, ary ho toy ny borosy fototra, borosy mena sns.
1. vita amin'ny fitaovana avo lenta, malefaka malefaka, marevaka amin'ny hoditra ary maharitra.
2. Azo ampiasaina hanadiovana ny vovoky ny hoho, koa ho borosy fototra, borosy mena ary sns.
3. Miaraka amina tahony lava mahafinaritra, manomeza fahatsapana azo ahina amin'ny tanana.
4. Fomba 5 hisafidianana, mahafeno ny fitakianao samihafa.
5. Mety ho an'ny artista fantsika matihanina na ho an'ny vao manomboka.